အသုံးပြုသူ:Zawthet/Archive2- ဝီကီပီးဒီးယား
Before September 18 2008
၁ Filling out Assessment page
၂ Building Community Portal
၃ Input system
၄ Fonts converter
၅ Redesign Help
၆ A little bug on Main page
၇ Automatic typing in Burmese script
၈ uncyclopedia Burmese
၁၀ Burmese placenames
၁၁ က-အ အက္ခရာအညွှန်း
Filling out Assessment page[ပြင်ဆင်ရန်]
Hi, can you help me fill out the blank article translations on Wikipedia:Assessment so we can get the most-needed basic articles started? Thanks. --ဟင်္သာtalk ၂၂:၂၁၊ ၂၀ စက်​တင်​ဘာ​ ၂၀၀၈ (UTC)
Building Community Portal[ပြင်ဆင်ရန်]
I find community portal pages in ZawGyi wiki powerful to get contributor. How about make one here? A bit of informal to ease new user. I find that people do not start putting on the content, but talkawhile to other users. Most serious people start ask permission to edit wiki. Some people unsure their topics are belong to an encyclopedia. They need to build up confidentawhile before contributing. An informal portal pages isamust. If anything happen, we could archive them over time. Okisan ၁၁:၃၂၊ ၁၅ အောက်​တို​ဘာ​ ၂၀၀၈ (UTC)
Yeah. It isagood idea. I will try to build one here too. --Zawthet ၀၁:၃၈၊ ၁၆ အောက်​တို​ဘာ​ ၂၀၀၈ (UTC)
Thanks. How about if we build same look-and-feel of the community portals in both sites with mutual hyperlinks? I know it is against Wikipedia Foundation linking policy, but this well help us to combine bot community here and native community at wikimyanmar. Okisan ၀၂:၂၀၊ ၁၇ အောက်​တို​ဘာ​ ၂၀၀၈ (UTC)
Is it possible to request wikimyanmar to put into Interwiki Map? If it is possible, I think it will be easier for us to combine the community and it won't be against the Wikimedia Foundation Policy. --Zawthet ၀၃:၅၉၊ ၁၇ အောက်​တို​ဘာ​ ၂၀၀၈ (UTC)
Great! Thanks. We have startedadiscussion to go for Interwiki Map. All of interwiki webs seems to have specific purpose other than Wikipedia. :) anyways see how. Okisan ၀၄:၃၁၊ ၁၇ အောက်​တို​ဘာ​ ၂၀၀၈ (UTC)
ကိုဇော်သက် ဘယ် input system သုံးလဲဗျာ။ အောက်ကာမြင် နဲ့ သေတ် အစဉ် အမြဲလွဲတယ်။ Input textarea က padauk ဖြစ်ပြီး output HTML body မှာ Myanmar3 ဖြစ်လို့ထင်တယ်။ Okisan ၀၃:၁၉၊ ၂၆ စက်​တင်​ဘာ​ ၂၀၀၈ (UTC)
ကျွန်တော် Keyman ကို myanmar3.kmx နဲ့သုံးပါတယ်။ ဘယ်နေရာလွဲနေလဲဆိုတာ ကျေးဇူးပြုပြီး ပြောပြပေးပါဗျာ။ --Zawthet ၀၃:၄၁၊ ၂၆ စက်​တင်​ဘာ​ ၂၀၀၈ (UTC)
UTN11 note မှာ Visible virama (အသေတ် U+103A) က အောက်ကာမြင် (U+1037) ရဲ့ရှေ့က လာရပါတယ်။ ကိုဇော်သက်ရဲ့ input မှာ ပြောင်းပြန်တွေဖြစ်နေလို့ပါ။ kmx မှာ တစ်ခါတယ် normalize လုပ်သင့်ပါတယ်။ Okisan ၁၂:၄၄၊ ၂၆ စက်​တင်​ဘာ​ ၂၀၀၈ (UTC)
ဝိဇ္ဇာလည်း ပြောင်းပြန်ပဲ။ :) Okisan ၁၂:၄၆၊ ၂၆ စက်​တင်​ဘာ​ ၂၀၀၈ (UTC)
ပြောင်းလို့ရမယ့် နည်းလမ်းလေးများရှိရင် ပြောပြပါဦး။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ --Zawthet ၁၇:၀၄၊ ၂၆ စက်​တင်​ဘာ​ ၂၀၀၈ (UTC)
Issue တင်ထားတယ်ဗျာ။ စောင့်ကြည့်ရအောင်။ Okisan ၁၇:၄၄၊ ၂၆ စက်​တင်​ဘာ​ ၂၀၀၈ (UTC)
I think this problem could be MediaWiki normalization bug, that Ko Ravi reported two months ago. Okisan ၀၄:၀၇၊ ၇ အောက်​တို​ဘာ​ ၂၀၀၈ (UTC)
Yes it is an issue mentioned there. MedaiWiki has already corrected the Kinzi error, but the Virama error in reality wasaUnicode Standardization issue rather thanaMediaWiki bug. This means that the normalization done by MediaWiki is in line with the normalization data from the Unicode Character Database, if you will read the thread of that bug you will find it there. The gist is that UTN #11 Version3will be updated with the new order as seen in the UCD, and the reason will be mentioned asaforesight during the standardization process. No amount of debate will change this as normalization is primarily about stability rather than what is correct and what is incorrect. As long as there is one form, stability is preserved. Hope that helps. --RaviC (talk • contribs) ၁၅:၂၂၊ ၂၀ အောက်​တို​ဘာ​ ၂၀၀၈ (UTC)
ကျွန်တော် အရင်က ဇော်ဂျီကိုသုံးတာများပါတယ်။ ဇော်ဂျီနဲ့ myanmar ကို အပြန်အလှန်ပြောင်းလို့ရရင် ပိုအဆင်ပြေမယ်ထင်ပါတယ်။ ဂျာနယ်ထဲမှာဖတ်လိုက်ရတာက မြန်မာစာရေးကြီးဆိုတဲ့ ဆော့ဝဲက ဖောင့်တွေ့ကို ပြောင်းပေးနိုင်တယ် လို့ဆိုပါတယ်။ ဘယ်က ရနိုင်မလဲမသိဘူး။
converter ပေးတဲ့အတွက် ကျေးဇူအထူးတင်ပါတယ်။
Hi I would like to redesign the help pages. Since current EN.Wiki navigation is too complex for navigation, I will make similar layout and setting.
Regards, Okisan ၁၀:၁၁၊ ၃၁ အောက်​တို​ဘာ​ ၂၀၀၈ (UTC)
Hi, you can go ahead and do what you think is better. It will be great. There is no "sysop" protection level on help pages. --Zawthet ၁၇:၁၃၊ ၃၁ အောက်​တို​ဘာ​ ၂၀၀၈ (UTC)
Thanks. I will be slow to respond during these weeks since there is no internet in my flat. :( Okisan ၀၂:၀၆၊ ၃ နို​ဝင်​ဘာ​ ၂၀၀၈ (UTC)
A little bug on Main page[ပြင်ဆင်ရန်]
the word သင်္ချာ and သချာင်္ have two different pages,
but it's only one word. the correct one is သင်္ချာ
the miss spelling problem occur when people use different fonts Myanmar3 and Padauk
correct sequence to type သင်္ချာ with Padauk သ သင်္ သင်္ခ သင်္ချ သင်္ချာ
so please correct the two pages for သင်္ချာ problem
Myanmar ၀၈:၀၄၊ ၄ ဒီ​ဇင်​ဘာ​ ၂၀၀၈ (UTC)
Ok. I will resolve it. Thanks for you feedback. --Zawthet ၁၀:၅၆၊ ၈ ဒီ​ဇင်​ဘာ​ ၂၀၀၈ (UTC)
welcome and my pleasure to help. Myanmar ၁၀:၄၂၊ ၉ ဒီ​ဇင်​ဘာ​ ၂၀၀၈ (UTC)
There is another page needed to delete http://my.wikipedia.org/wiki/Category:%E1%80%9E%E1%80%81%E1%80%BB%E1%80%AC%E1%80%84%E1%80%BA%E1%80%B9 Thankyou Myanmar ၀၂:၁၄၊ ၁၀ ဒီ​ဇင်​ဘာ​ ၂၀၀၈ (UTC)
OK. Done. --Zawthet ၁၁:၄၇၊ ၁၀ ဒီ​ဇင်​ဘာ​ ၂၀၀၈ (UTC)
ဟုတ်တယ်။ ကျနော်လည်း ကင်းစီးအသတ်တွေ အောက်ရောက်နေတာ မြင်ရတယ်။
ပြီးတော့ ပြောချင်တာက ဗဟိုစာမျက်နှာမှာရော အတွင်းမှာပါ မမှားသင့်တဲ့ စာလုံးပေါင်းအမှားတွေကို ပြင်စေချင်တာပါ။ ဒီမှာ [] နည်းနည်းချင်း ရေးသွားမယ်။
လာရောက်ကြည့်ရှုသူတွေ အထင်သေးစရာဖြစ်မှာ စိုးတာပါပဲ။ --Mmthinker ၁၁:၃၁၊ ၂၁ ဖေ​ဖော်​ဝါ​ရီ​ ၂၀၀၉ (UTC)
Automatic typing in Burmese script[ပြင်ဆင်ရန်]
I see that many Burmese people do not haveaBurmese keyboard to type in the Burmese Unicode font. A good solution would be to enable the users to automatically type in Burmese on Myanmar Wikipedia.
For example, Amharic Wikipedia has implemented such asasystem so whenever you edit an article there, the amharic script automatically shows up. Suchasystem has also been successfully implemented on the following Wikipedias:
For information on how to install suchasystem onto Burmese Wikipedia, you can ask User:Codex Sinaiticus or User:Eukesh. --Jose77 ၀၇:၅၀၊ ၇ မတ်​ ၂၀၀၉ (UTC)
Hi, Jose77. Thank you very much for your information. I will look into the issues. --Zawthet ၁၆:၃၂၊ ၇ မတ်​ ၂၀၀၉ (UTC)
	We explain This isaparody web sight singing military personnel politicians etc. But not the web. Justaproject. --Sahayfont ၀၆:၂၀၊ ၁၃ ဇွန်​ ၂၀၀၉ (UTC)
I see that this article was deleted. Could you tell me what happened to the article? Thanks. --Jose77 ၀၁:၄၆၊ ၂၀ စက်​တင်​ဘာ​ ၂၀၀၉ (UTC)
I can't find deletion log or change log for this page. Let me check. I will get back to you. --Zawthet ၀၉:၂၃၊ ၂၀ စက်​တင်​ဘာ​ ၂၀၀၉ (UTC)
Jose77. It is very strange. I can't even view "history" for this page. Could you try to contact Wikimedia Admin? I have no idea what happen. --Zawthet ၁၈:၄၁၊ ၂၀ စက်​တင်​ဘာ​ ၂၀၀၉ (UTC)
That's okay. I have restored the article now. I know it's not your fault at all, but I do not know why it happened; luckily I had storedahardcopy of the file previously. --Jose77 ၂၃:၁၇၊ ၂၀ စက်​တင်​ဘာ​ ၂၀၀၉ (UTC)
ကိုဇော်သက်ခင်ဗျား အကြောင်းအရာတူတစ်ခုတည်းကို ခေါင်းစဉ်နှစ်မျိုးဖြစ်အောင် ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲခင်ဗျား။ ဥပမာ- ဓမ္မစင်္ကြာ ဆိုတဲ့ ခေါင်းစဉ်နဲ့ ရေးထားတယ်ဗျာ၊ အဲဒါကို 'ဓမ္မစက္ကပဝတ္တန သုတ္တံ' သို့မဟုတ် 'dhammacakkapavattana sutta' လို့ရှာရင်လဲ ဓမ္မစင်္ကြာ ကိုပဲ ရောက်စေချင်ရင် ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲခင်ဗျာ။
I have added some new names where our church communities have recently been formed. Do you know the Burmese translations for some of those these placenames?
Any help at all would be very gratefully appreciated, Thankyou. --Jose77 ၀၈:၂၀၊ ၁၉ အောက်​တို​ဘာ​ ၂၀၁၀ (UTC)
Done. Zawthet ၀၁:၀၃၊ ၂၀ အောက်​တို​ဘာ​ ၂၀၁၀ (UTC)
Thankyou for your help! I am filled with gratitude. May Burmese Wikipedia prosper! --Jose77 ၀၁:၄၈၊ ၂၀ အောက်​တို​ဘာ​ ၂၀၁၀ (UTC)
အက္ခရာ အညွှန်းမှာ ‘က’ ကို နှိပ်လိုက်ရင် ‘ခ’ နောက်ပိုင်းက စာမျက်နှာတွေ ထွက်လာတယ်။ အမှန်က ‘က’ နဲ့ စတဲ့ စာမျက်နှာတွေ ထွက်လာရမှာ။ ဒီတစ်ချက် ပြင်လို့ရမလား။ သတိထားမိတာတော့ ကြာပြီ။ အက်ဒမင်တွေ လှုပ်ရှားတာ မတွေ့ရလို့ အခုမှ ပြောဖြစ်တယ်။ --ဇာမဏီ ၂၃:၂၀၊ ၂၆ အောက်​တို​ဘာ​ ၂၀၁၀ (UTC)
ကြိုးစားကြည့်ဦးမယ်။ ဘာဖြစ်တာလဲတော့ အသေအချာ မသိဘူး။ Thanks. Zawthet ၀၀:၂၇၊ ၂၇ အောက်​တို​ဘာ​ ၂၀၁၀ (UTC)
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=အသုံးပြုသူ:Zawthet/Archive_2&oldid=53444" မှ ရယူရန်
ဤစာမျက်နှာကို ၂၁ နိုဝင်ဘာ ၂၀၁၀၊ ၀၆:၅၁ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။